၁၇ကြိမ်မြောက် တရုတ်ပြဇာတ်ပွဲတော် ဝူဟန်မြို့၌ ကျင်းပပြီးစီး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင်ဆီးနှင်းများ ကျဆင်းလျက်ရှိ
ယူနန်ပြည်နယ် တာ့ဆန်းပေါင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေတွင် ယခုနှစ်ပထမအသုတ် ဆောင်းခိုလည်ပင်းနက်ကြိုးကြာငှက်များ ဝင်ရောက်ခဲ့
CNPC သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု အထွတ်အထိပ်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းမည်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချင်းသောင်မြို့တွင် လှပသော အနီရောင်မေပယ်ရွက်များက ခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိ
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံက Gaofen အမှတ် ၁၁ ဂြိုလ်တု ၀၃ ကို အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင်
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း “အစိမ်းရောင်လမ်း”အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂေဟစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် ပြောင်းလဲလာ
နေကြတ်ခြင်းနှင့်လကြတ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင်စုစုပေါင်း ၇ ကြိမ်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ရှီး(ကျွမ့်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ ကွေ့လျင်-လျိုကျိုး အမြန်အဝေးပြေးလမ်းသစ်
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင် ဘတ်စ်ကားကြီးတစ်စင်း မီးလောင်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၄၅ ဦး သေဆုံး
တရုတ်ကုမ္ပဏီက ဘဲလ်ဂရိတ်-ဘူဒါပတ်စ် ရထားလမ်း၏ ၁၀၈ ကီလိုမီတာရှည်သောရထားလမ်းပိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း စတင်
COP26 ညီလာခံတွင် ရာသီဉတုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်သစ်နှင့်အတူ ပြီးဆုံး
ဝူဟန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၁၇ကြိမ်မြောက် တရုတ်ပြဇာတ်ပွဲတော်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် မြို့တော် ဝူဟန်တွင် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အောက်တိုဘာ ၉ ရက်က စတင်ကျင်းပသည့် ပွဲတော်တွင် ပီကင်းအော်ပရာ၊ Kunqu အော်ပရာ၊ ဒရာမာပြဇတ်နှင့် ကလေးပြဇာတ်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်းပြဇာတ် ၃၁ ပုဒ်ကို ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လက်ရာများ နှင့် နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး အကြောင်းများကို စုစည်းတင်ဆက်သည့် လက်ရာများမှာ ပရိသတ် အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် တွင် ၎င်းပွဲတော်ကို ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မတူညီသော တရုတ်နိုင်ငံရှိမြို့များ၌ နှစ်နှစ်တစ်ကြီမ်ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။ ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်ပြဇာတ်ပွဲတော်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲကျန်း ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟန်ကျိုး တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
17th China Theater Festival concludes in Wuhan
WUHAN, Oct. 27 (Xinhua) — The 17th China Theater Festival,aChinese national performing arts event, concluded Wednesday in the capital of central China’s Hubei Province, Wuhan.
A total of 31 plays of various genres, including Peking Opera, Kunqu Opera, drama, and children’s plays, were performed at the festival, which kicked off on Oct. 9.
Works that mark the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China andacollection of works featuring the country’s anti-poverty and COVID-19 battles drew large audiences.
Founded in 1988, the festival is held inadifferent Chinese city every other year. The 18th China Theater Festival will take place in Hangzhou, the capital of east China’s Zhejiang Province, in 2023. Enditem
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်တွင် (၂၄)နာရီအတွင်း Nucleic acid ဓါတ်ခွဲနမူနာ (၂.၅၂၈)သန်း ရယူပြီးဖြစ်